Daawo: Sh. Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil oo ka towbad keenay buug uu ku aflagaadeeyay diinta Islaamka – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 29th April 2017 0142
Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil waxuu qoray buug af ingiriisi ku qoran oo uu cinwaan uga dhigay “Islamic Extremism: The Untold Truth”. Sheekh Mahamuud Maxamed Sshibli ayaa maalin hore goob uu muxaadaro ka jeedinayay ka sheegay in buuga cabdiraxmaan si cad uga hor imanayo diinta islaamka, waxaana halkaas ka dhalatay dood dhexmartay sheekh Shibli iyo Cabdiraxmaan, taasoo ugu dambeyn keentay in Cabdiraxmaan qirto kana towbad keeno afkaarihi uu buuga ku qoray.
Sida uu muxaadaradiisa xalqadi koobaad ee radinta buuga ku soo bandhigay sheekh Maxamuud Maxamed Shibli afkaarta ku qoran buuga waxay ku dul wareegeysaa sadex su’aalood oo kala ah; “yaa argagixiso ah?, assalkeedu waa halkee?, sidee looga hor tagi karaa?
Qoraaga ayaa istaagay mowqif aan marna laga fileyn qof muslim ah, waxuuna si cad u sheegay in assalka argagixisadu yahay Qur’aanka kariimka, argagixisaduna tahay dadka aaminsan in Diinta sida ay tahay loogu dhaqmo.
Halka xalkana uu ku sheegay in Qur’aanka qaar la iska xooro, sida aayadaha ka hadlaya jihaadka iyo in gaalada aakhiro la cadaabayo.
Ka dib marki uu Sheekh Shibli xalqadi koobaad ku kashifay ujeedada guracan ee uu buugu xambaarsan yahay, islamarkaana balan qaaday xalaqa ama muxaadaro labaad ayuu Cabdiraxmaan Mmaxamed Jibriil soo dhigay baraha bulshada muuqaal uu ku sheegay inuu ka laabtay afkaarihii buuga ku qornaa:
“Waxaan halkan ka cadeynayaa aniga oo ah sheekh cabdiraxmaan maxamed jibill inaan ka laabtay gefdiimeedki ku qornaa buugi aan qoray ee cinwaankiisu ahaa ” Islamic Extremism: The Untold Truth”. Gefkaas asaga ah ilaahey baan uga towbad keenayaa, umadda soomaaliyeedna waa ka raali gelinayaa.
Waxaan cadeynayaa inaanan ka tirsaneyn urur ama website la yiraahdo maandoon”.
Hakan ka daawo doodihi uu Sh. Shibli ku naqdiyay buuga cabdiraxmaan.
Halkan ka daawo qiraalka iyo towbad keenka
Waxaa jira su’aalo la isweydiinayo, sida ma xaqiiqbaa in Cabdiraxmaan buuga qoray. Dad aqoon u leh waxay ii sheegeen in mustawahiisa dhanka luqada Ingiriiska aysan gaarsiisneyn heer uu buug qoro, waxaana macquul ah in wadaadka magaciisa la adeegsaday.
Waxaa kaloo la is weydiinayaa, qof sheeganaya derajada sheekh, oo ku dhacay dambiga intaa la eg towbadiisu maxay noqon kartaa? Maxay yihiin shuruudaha ku xiran si towbadiisa aqbal u noqoto? Bayaanka uu akhriyay ee towbad keenka waxuu ku sheegay in dad badan oo asxaab ah ay wada gaareen gorfein ka dib, sidaasna la isla gartay inuu u dhigo hadalka. Waxaa sidoo kale hadalladiisa ka mid ah in marki si khaldan loo fahmay buuga uu ka laabtay. Ma la dhihi karaa arimahan waxay abuurayaan shakki, maxaase dhici doona hadii uu sii wado xiriirka iyo qoraalada uu ku daabaco website-ka “maandoon”?
Dhanka kale, buugan xumaha xambaarsan ee faafay maxaa laga yeeli doonaa, si la mid ah, cinwaanka qalafsan ee Sheekh Shibli “askar sheydaan”
Waxaan ku soo afmeerayaa Allaa mahadsan, marka xigtana culimada soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagan difaaca diinta, afkaaraha gurracan ee ay xambaarsan yihiin dib jire yaasha, xag jire yaasha iyo kuwa Sheydaanku duufsaday, sida qalinleyaasha gaaladu adeegsato.
Akhriso: Liiska magacyada xubnaha 9 guddi oo aqalka sare ay maanta doorteen
Akhriso: Masuul horay xil uga soo qabtay jubbaland oo loo magacaabay afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka
Faahfaahinta:- Dab khasaare Hantiyeed geystay oo xalay Muqdisho ka dhacay
Muqdisho:-Madaxweyne Farmaajo iyo Waft uu hogaaminayo Oo Saacadaha Soosocda ku wajahan Garoowe
Ahmed sudani 7th January 2018